Isitudiyo esibanzi 10 min ukuhamba ukusuka elunxwemeni kunye nephuli
Indlu ine-air conditioning, ikhitshi elincinci, i-wifi, i-ethernet kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko. Ibhedi iyiQueen ephindwe kabini. Ibekwe kumgangatho wokuqala okanye wesibini wendawo yokuhlala ngokuxhomekeke kubukho. Inebalcony enentaba kunye negadi.
-Ngokuxhomekeke kubukho, ifulethi liya kuba kumgangatho wokuqala okanye wesibini wehotele.
-Ukutshintsha rhoqo kwelinen kunye neetawuli zinikezelwa (ngexesha lenkonzo yokucoca)
4.96 (iingxelo zokuhlola 28)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chania